मुकुन्दे र दिलनिशानी मेयर चौधरीको पक्षमा ! «
मुकुन्दे र दिलनिशानी मेयर चौधरीको पक्षमा !
प्रकाशित मिति :5June, 2019 6:18 pm
इटहरी उपमहानगरपालिका मेयर द्धारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई दिएको अभिव्यक्तिका कारण यस विषयले अहिले राष्ट्रिय रुपमा तरंग सिर्जना गरेको छ । लगातार विच्कीएका मेयर नरम होइन झन झन गरम हुँदै गएका छन् । हक्की स्वभावका मेयर चौधरीले आफ्नो अडान बाट कति पनी पछि नहट्ने बरु पार्टीले कारवाही गरे बारी खनेर बस्ने बताइसकेका छन् । अहिले मेयर चौधरीको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक संजालमा व्यापक बहस सिर्जना भएको छ । कतिपयले मेयरको नियत सहि भए पनी शैली सहि नभएको प्रतिक्रिया दिएका छनु् भने कतिले मेयर कुनै पनि कोणबाट सहि नभएको बताएका छन्।
यस विचमा पत्रकार तथा विश्लेषक दिल निशानी मगर र मुकुन्दे नामले परिचित मुकुन्द घिमिरेले पुर्ण रुपमा मेयर चौधरीको पक्षपोषण गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समर्थन जनाएका छन् । पत्रकार दिल निशानी मगरले मेयर चौधरीले वाध्य भएर उक्त कदम चाल्न बाध्य भएको भन्दै इमान्दार मेयरलाई बदनाम बनाउँन चौतर्फी रुपमा सुनियोजित घेराबन्दी भएको लेखेका छन् ।
यस्तो छ दिन निशानी मगरले इटहरीका मेयर चौधरीलाई समर्थन गर्दै फेसबुकमा लेखेको स्टाटस
‘ईटहरीमा मुकाम बनाएर बस्ने एउटा समुहले सार्वजानिक जगालाई आफूहरुको बनाउन भरपुर प्रयास गर्यो। तर त्यो प्रयासलाई मेयर द्वरिकलाल चौधरीले असफल बनाई दिए। अख्तियार लगाउछु भन्ने धम्की दिदै पटक-पटकको जगा हडप्ने प्रयासलाई मेयरले क्रमश असफल बनाईरहे। अन्तत; त्यो समुह झुटा आरोप लिएर अख्तियार कहाँ पुग्यो। तर अख्तियारले मेयर चौधरीलाई दोषी भेटाउन सकेन, सफाई दियो। चौधरीलाई जेलमा सडाउने माफीयाहरुको पहिलो प्रयास अख्तियारको निर्णय संगै स्वत; असफल भयो। त्यस घटना पश्चात खुरुखुरु काम गर्न मन पराउने ईमान्दार छवी बनाएका मेयर चौधरी मानसिक रुपमा आक्रमक हुदै गएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउछन्। मेयर चैधरी फायर त यतिबेला भए जतिबेला नगरपालिकाको कर्मचारीहरु समेत जगा माफियाहरुकै पक्षमा काम गर्न थाले। मेयरको केही सिप लागेन। केही सिप नलागेपछी तिमीहरु भ्रष्टाचारी भएको भन्दै केही कर्मचारीलाई निष्काशन समेत गरे। त्यतीबेला सम्म मेयरको विपक्षमा ठुलो शक्ती खडा भैसकेको थियो। यो शक्तिले सडकबत्ती सम्बन्धी उपमहानगरको पुरानो मुद्दा बल्झाएर मेयरलाई फेरी अख्तियार पुरायो। तर देश्रो पटक पनि मेयर निर्दोष सावित भए। यसरी दोश्रो पटक मेयरका सामु जगा माफियाहरुले घुँडा टेके। अख्तियारले मेयरकै पक्षमा फैसला गरेपछी जगा माफियाहरु संग अन्तिम विकल्प थियो- मेयरको चरित्रहत्या। त्यसको लागी उनीहरुले केही पत्रकारहरुको दुरुप्रयोग गरे। पत्रकारहरुको झुटो अफवा देखेर मेयर आजित भए। धैर्यताले सिमा नाघेपछी मेयर हिजोको जस्तै ईमान्दार भईरहन सकेनन्। र उनी कराउन थाले, चिच्याउन थाले। सुनुयोजित रुपमा आफू बिरुद्ध लाग्नेहरुलाई प्रमाण पेश गरेर देखाउ, एक कप चिया कसैको खाएको भए फाँसी चढ्न तयार छु भन्न थाले। तर कसैले प्रमाण पेश गर्न सकेनन्। तर झुटो आरोप भने लगाईरहे। यसरी एक ईमान्दार मेयरको दिमागमा नराम्रो संग धक्का पुग्न गयो र उनले गती छाडे। अब मेयरलाई पदबाट बर्खास्त गरेपनी, पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेपनी हुनेवाला केही छैन। किनभने मेयर कुनै ठुलो पदको मानिस भन्दा पनि एक ईमान्दार मानिस भएर बाँच्न चाहेका रहेछन्।’
त्यसै गरि मुकुन्दे पनि इटहरीका मेयर चोधरी सबैभन्दा सफल मेयर रहेको भन्दै उनले राम्रो काम गर्न खोज्दा माफियाहरुलो घेरिएर बदनाम बनाउँन खोजेको बताएका छन् ।
यस्तो छ मुकुन्देको फेसबुक स्टाटस
‘नमुना उपमहानगर इटहरीका सफल मेयर द्वारिकालाल चौधरी साहेबलाई घरीघरी जिस्काइरहनेहरुलाई कारबाही गर, आदिवासी थारुहरुले पहाडको भाषा मिलाएर बोल्न नसक्नु स्वभाविक नै हो, वहाँको ठाडो प्रस्तुतिलाई मिडिया मार्फत बजारमा बेचेर गुजारा चलाउने दरिद्र मानसिकताका पत्रकारहरुलाई तत्काल अरब पठाईदेऊ!’
मेयर चौधरी प्रचण्डका गुरु !
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई सिध्याइदिन्छु भन्दै एक करोड रुपैँया छुट्याएको विषयले अहिले बजार पुरै तातेको छ । विगत केहि समय यता देखिनै विवादको चंगुलमा फसिरहेका मेयर चौधरीको पछिल्लो काण्डले भने पुरै देश एकै पटक तरंगित भएको छ । उपमहानगरपालिकाको मेयर जस्तो अन्यन्त जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तिले जुन स्तरको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ,यसले कतै तिर बाट पनि शोभायमान देखिएको छैन । मेयर चौधरीको भावना पवित्र हुनसक्छ, उनले भन्न खोजेका कुरा पनि सहि हुनसक्छ तर जुन स्तरको शब्द चयन र प्रस्तुतीमा उनि झरेका छन् यस बाट मेयर चौधरीको मात्रै होइन उनको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पनि शिर निहँरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कागै्रसले सत्तारुढ नेकपालाई लगाउँने सबैभन्दा गम्भिर आरोप भनेको कम्युनिष्ट सरकार अन्तत अधिनायकवादको बाटोमा जान्छ जनताका अधिकारहरु कटौटी गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्छ । एक पटक त काग्रेस सभाति शेरबहादुर देउवाले कम्युनष्टहरु सत्तामा पुगे भने रुन पनि पाइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मेयर चौधरीको प्रस्तुती र प्रयोग गरेका शब्द हेर्दा काग्रेसले आरोप लगाएको भन्दा पनि कडा खालको अधिनायवादको झल्को मेयर चौधरीको मुहारमा देख्न पाइन्छ । आफुलाई कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकता हुँ भन्दै मेयर चौधरी ले पटक पटक नेपालको संविधानको खिलापमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
लेनिन् देखि माओ र स्टालिन सम्मको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको व्यवस्थालाई बर्जुवा व्यवस्था भन्दै आफु कुनै कानुन प्रसाशन र प्रहरी नमानी मन नपरेको मान्छेलाई सिधै जनकारवाही गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आफुले कानुन नमान्ने अभिव्यक्ति सार्वजकिन रुपमा दिने र सक्ने भए कारवाही गरेर देखाउँन धम्की दिने सम्मको आँट मेयर चौधरीले गरेका छन् । यति सम्मकी उनले आफ्नो पार्टीको हाई कमाण्डलाई समेत चुनौती दिँदै कुरा लगाइएदिन पनि भनेका छन् ।
पत्रकार रवि लामिछाने सँगको कुराकानीको क्रममा मेयर चौधरीले नेकपका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँग अस्ती भर्खरै हात मिलाएर कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने सिकेर आएको पनि बताएका छन् । लगातार पत्रकार देखि कर्मचारी सम्मलाई धम्की दिइरहेका मेयर चौधरी शान्त हुनुको साटो दिनानु दिन झन उग्र हुँदै गइरहेका छन् । नेकपाकै उच्च तहका केहि नेताले चौधरीको नियत सहि भए पनि तरिका सहि नभएको भन्दै माफी माग्न आग्रह गरेका छन् । पार्टीका शिर्ष तहका नेतालाईनै ओपन च्यालेन्ज गरेका चौधरीले चौतर्फी ओलोचना पछि अब आगामी कदम कसरी आगाडि बढाउँछन् हेर्न बाँकी नै छन् ।
मेयर चौधरी झन उग्र, रवि लामिछानेलाई समेत थर्काए
पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा ज्यान मार्न एक करोड छुट्याएको छु भन्दै धम्की दिने इटरहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरी झन् उग्र हुँदै गएका छन् । पत्रकारलाई धम्की दिएको विषयमा न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधाकुरा जनता सँगमा पत्रकार रवि लामिछानेले मेयर चौधरीलाई प्रश्न गर्दा उल्टै आफुलाई कानुन नसिकाउँन धम्की दिएका छन् । तपाइले पत्रकार मार्न एक करोड रुपैँया छुट्याएको हो रु भन्ने प्रश्नमा मेयर चौधरीले एक करोड त के रिस उठ्यो भने १० करोड पनि छुट्याँछु रिसमा कसैले वेद पढ्दैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् । खुल्ला चुनौती दिएको भन्दै उनले आफुलाई कारवाही गरेर देखाउँन पनि चुनौती दिएका छन् । ‘मैले धम्की दिए ल म माथी कारवाही गर्नु, भन्दै मेयर चौधरीले खुल्ला चुनौती दिएका छन् ।
आफुले धम्की दिएको मान्छे पत्रकार नभएर पत्रुकार र चाटुुकार भएको भन्दै उनले अब त उसलाई कालोमोसो दलेर बजार घुमाउँने समेत बताए । प्रहरी छैन रु प्रसाशन छैन रु के तपाई कानुन भन्दा माथि हो रु भन्ने प्रश्नमा चौधरी आफु कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएकाले कुनै कानुन खोजेर नबस्ने आफैँ एक्सनमा गैहाल्ने बताए । प्रहरी प्रशासन सबै बर्जुवा भएको आरोप लगाउँदै उनले रविलाई भने ‘रवि लामिछाने जि तपाई कान खोलेर सुन्नुस् तपाइले मलाई कानुन नसिकाउँनुस्’ ।
इटहरीमा यस्तै शासन चल्छ भन्दै मेयर चौधरीले पहिला पनि आफुले एक पित पत्रकरीता गर्ने पत्रकारलाई गु होलेर टाउकोमा हालेर इटहरीबाटै लखेटेको समेत बताए । यती अराजक हुँदा तपाइँलाई पार्टीले केहि भन्दैन रु भन्ने प्रश्नमा मेयर चौधरीले ‘के भन्छ रु पार्टीले केहि भन्दैन म कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ द्धारिकालाल चौधरी जम्बर छ जम्बर’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । तपार्ई जस्तो मान्छे त मैलै कोही देखेको छैन अचम्मको मान्छे हुँनुहँदो रहेछ भन्दा चौधरीले आफुले रामप्रसाद चौलागाँइलाई सपथ ग्रहण कार्यक्रममै कुटेको बताए । चौलागाँइ इटहरीका पुर्व एमाले नेता हुन् ।
भ्रष्टाचारीलाई एक एक गरेर कालोमोसो लगाउँने हो भन्दै चौधरीले अब आफुले कानुन पढेर बस्ने होइन जनकारबाही गर्ने बताए । रवि लामिछानेलाई आफ्नो बारेमा नेताहरुलाई सुनाइदिन पनि चुनौती दिए । उनले भने ‘केपी ओलीलाई सुनाइदिनुस् ,माधव नेपाललाई सुनाइदिनुस् तपाईको कार्यकर्ता जब्बर रहेछ भनेर प्रचण्ड सँग त अस्ती भर्खर सिकेर आएको छु हात मिलाएर’ । निकै आक्रोसित र उत्तेजित भएका मेयर चौधरीलाई सिर्फ धन्यवाद दिएर रवि विदा भए